Ny BlackBerry Aurora dia ofisialy izao nefa tsy manolotra kitendry ara-batana | Vaovao momba ny gadget
Ny BlackBerry Aurora dia efa ofisialy nefa tsy manolotra kitendry ara-batana ho antsika
BlackBerry dia nanolotra tamin'ny fomba ofisialy tao amin'ny Mobile World Congress ny BlackBerry KEYone vaovao, finday avo lenta misy klavier ara-batana, système d'exploitation Android ary endri-javatra mahaliana sy fika manokana. Nihevitra izahay rehetra fa ny orinasa kanadiana dia nifarana nandritra ny fotoana fohy tamin'ny famoahana ireo fitaovana finday, saingy tsia, diso izahay ary tao anatin'ny ora farany dia natolotra tamin'ny fomba ofisialy ny iray vaovao Blackberry Aurora.
Mazava ho azy, mandritra ny fotoana fohy dia amidy any Indonezia ity fitaovana finday vaovao ity, izay hamoahana amin'ny vidiny 249 euro. BlackBerry dia mbola tsy nanamafy raha ho amidy any amin'ny firenena maro ity terminal vaovao ity, na dia eritreretina aza fa amin'ny farany dia lasa fitaovana iraisampirenena izy io, izay azo amidy any Eropa aza ary indrindra any Espana.
2 BlackBerry Aurora, eo afovoany tsara
Mikasika ny endrika Ity BlackBerry Aurora ity dia tsy mahagaga antsika amin'ny fotoana rehetra, ary io no ahitantsika fitaovana finday izay mitovy be amin'ny Faran'ny terminal DTEK efa misy eny an-tsena izany. Tsy misy bokotra ara-batana eo aloha, ity fitaovana finday vaovao ity dia manana endrika madiodio ary raha tsy misy ny fananana azy eny am-pelatanantsika dia toa tsara kokoa izany.
Rehefa mitsara ny famolavolana azy, izay manana ny fahatsorana ho sainam-pirenena, dia tsy azontsika hadinoina fa hahatratra ny tsena amin'ny vidiny 249 euro, izay tsy isalasalana fa vidiny mihoatra ny mahaliana ary mazava ho azy fa tsy manolotra hanome endrika miaraka amina famaranana premium na amin'ny zavatra mahagaga.
BlackBerry Aurora, eo afovoany tsara
Ny BlackBerry Aurora vaovao dia ny finday BlackBerry vaovao, ary izay dia miantso ho iray amin'ireo terminal miavaka amin'ilay antsoina hoe mid-range, noho ireo famaritana azy. Ao anatiny no ahitantsika mpikirakira ekipa tena ekena toy ny Snapdragon 425, tohanan'ny fahatsiarovana RAM 4GB ary manolotra tahiry anatiny 32GB ahafahantsika manitatra amin'ny fotoana rehetra amin'ny karatra microSD.
Mikasika ny efijery dia mahita habe iray isika 5.5 santimetatra miaraka amina famahana HD 1.280 x 720 teboka ary hakitroky 267 teboka isaky ny santimetatra. Amin'izao fotoana izao dia tsy nihoatra ny haitao an'ny tontonana, na dia asehon'ny zava-drehetra fa mety ho LCD IPS izany. Ny fakan-tsary any aoriana dia mampiakatra sensor 13 megapixel, afaka manoratra horonantsary FullHD amin'ny 30fps sy flash LED. Ho an'ny ampahany, ny fakan-tsary voalohany dia mametraka sensor 8 megapixel hahafahantsika manao selfie avo lenta.
Ny iray amin'ireo lafiny tsara indrindra amin'ity BlackBerry Aurora ity dia ny fananana ny Android Nougat 7.1 ho rafitra fiasa ary koa batterie 3.000 mAh mihoatra ny malala-tanana izay ahafahantsika maka vola haingana noho ny haitao Quick Charge 2.0.
Manaraka izany dia handinika ny endri-javatra lehibe sy mombamomba ny BlackBerry Aurora vaovao;
Efijery 5.5-inch misy famahana HD 1.280 x 720 teboka ary 267 dpi
Snapdragon 425 processeur
Fahatsiarovana RAM: 4GB
32GB fitehirizana anatiny azo velarina amin'ny karatra microSD
Fakan-tsary anoloana miaraka amin'ny sensor 8 megapixel
Fakan-tsary aoriana miaraka amin'ny sensor 13 megapixel
Batterie: 3.000 mAh miaraka amin'ny fiampangana haingana Quick Charge 2.0
Fifandraisana: LTE, WiFi 802.11 a / b / g / n
Rafitra miasa: Android 7.1 Nougat
Ny BlackBerry Aurora vaovao dia hamidy, amin'izao fotoana izao, any Indonezia miaraka amin'ny vidin'ny 3.5 ropia izay eo amin'ny fifanakalozana dia manodidina ny 249 euro eo ho eo. Araka ny efa fantatsika, ity fitaovana finday vaovao ity dia tsy hahatratra firenena hafa eran'izao tontolo izao, na dia toa sarotra itomboana aza izany ary matahotra izahay fa tsy ho ela dia ho lasa smartphone izay hamidy eran'izao tontolo izao, amin'ny maodely DTEK. amin'ny fizarana iraisam-pirenena.
Raha te hahalala raha hahatratra firenena maro kokoa, ankoatran'i Indonezia, dia hiandry fotoana fohy isika, ary hatraiza hatraiza ny varotra an'ity terminal ity dia hisy fiatraikany, ankoatry ny zanabola izay mety hanaitra azy eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena.
Tianao ve ny BlackBerry Aurora vaovao hamidy manerantany?. Lazao anay ny hevitrao amin'ny toerana natokana ho an'ny fanehoan-kevitra amin'ity lahatsoratra ity na amin'ny alàlan'ny tambajotra sosialy misy anay.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny gadget » General » About us » Ny BlackBerry Aurora dia efa ofisialy nefa tsy manolotra kitendry ara-batana ho antsika
Ireo no fihenam-bidy mahavariana ao amin'ny PS Store, hatramin'ny 70%
Google dia nahavita nanatsara ny mpandika teniny noho ny fampiasan-tsaina ny artifisialy